हिजो दिनभर : गृह मन्त्रालयले बन्द गर्‍याे सवारी पास , सुनको मूल्य एकैदिनमा ठूलो गिरावट
काेराेना भाइरस संक्रमितकाे संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले सवारी पास बन्द गरेकाे छ। गृहले बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै बिहीबारदेखि सवारी पास जारी नगर्न भनेकाे हाे।
पछिल्लो २४ घण्टामा ४ सय ८४ कोरोना संक्रमित, ६४ डिस्चार्ज
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा ४ सय ८४ मा कोरोना संक्रमण देखिएको पुष्टि गरेको छ ।
बुधवार नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ४ सय ८१ पीसीआर परीक्षण गरिएको र त्यसमा ४ सय ८४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताएका हुन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमणमुक्त भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या ६४ रहेको छ भने हालसम्म १६ हजार ७ सय २८ कोरोना संक्रमण जितेर घर फर्किसकेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए १ सय ३८ कोरोना संक्रमित
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा १ सय ३८ कोरोना संक्रमित थपिएको जनाएको छ ।
बुधवार नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ४ सय ८१ पीसीआर परीक्षण गरिएको र त्यसमा देशभरबाट ४ सय ८४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताएका हुन् ।
त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा १ सय ३८ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
डा. गौतमका अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा १ सय ९, भक्तपुरमा ८ र ललितपुरमा २१ जनामा संक्रमण देखिएको हो ।
कोरोना सङ्क्रमणलाई अवसरका रूपमा लिएर देश विकास गरौं : महामन्त्री कोइराला
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणलाई अवसरको रुपमा लिएर देशको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले कांग्रेसका पूर्वसभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ८१ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा बुधवार आयोजित ‘अन्वेषण यात्रा’ विषयक जुम कार्यक्रममा उनले कोभिड–१९ का कारण स्वदेश फर्केका युवालाई कृषि क्षेत्रमा लगाएर देशको विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन ।
“कोभिड–१९ लाई अवसरको रुपमा बदल्नका लागि स्वदेश फर्केका युवालाई कृषिमा जोडेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ”, उनले भने ।
कांग्रेसले मुलुकको सम्भावनालाई हेरेर विकासको खाका बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
महामन्त्री कोइरालाले वीपी कोइरालाले देखेको जनप्रतिनिधिद्वारा निर्माण गरिने संविधानको सपना स्व सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूरा गरेको बताउँदै नैतिकताको राजनीतिमा विश्वास गर्ने सुशील कोइरालामा सादा जिवन, उच्च विचार रहेको थियो, भने ।
फाउन्डेसनका अध्यक्षसमेत रहेका महामन्त्री कोइरालाले व्यक्तिभन्दा पार्टीलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्व कोइराला भ्रष्टाचारविरोधी नेताका रुपमा आफूलाई स्थापित गरेको बताए ।
पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र मूल्य मान्यता र सिद्धान्त हराउँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले पार्टीभित्र सिद्धान्तभन्दा पनि पैसा भएका व्यक्ति हावी हुँदै गएको धारणा व्यक्त गरे ।
फाउन्डेसनका सदस्य–सचिव अतुल कोइरालाले फाउन्डेसनले आगामी दिनमा ‘अन्वेषण यात्रा’लाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।
सुनको मूल्य एकैदिनमा ठूलो गिरावट
सुनको भाउमा एक्कासि ठूलो गिरावट आएको छ ।
अघिल्लो दिन मंगलवार १ लाख १ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ बुधवार घटेर ९५ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
एकैदिन सुनको भाउ ६ हजार २ सय रुपैयाँ घटेको हो ।
यस्तै तेजाबी सुन ९४ हजार ९ सयमा कारोवार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
चाँदीको भाउ पनि घटेर १२ सय १० रुपैयाँ प्रति तोला कायम भएको छ ।
मंगलवार चाँदी १ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ प्रति तोलामा कारोवार भएको थियो ।